ဇူလိုင် 2019 – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
636777 Views so far
ဇူလိုင် 17, 2019 နေ့
ထို႔အျပင္ SCG ၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ထုတ္ပိုးမႈလုပ္ငန္း၏စကၠဴထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္လည္း အသုံးျပဳထားေသာစြန္႔ပစ္စကၠဴမ်ားကိုစုေဆာင္းကာျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္အက်ိဳးရွိစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဤထုပ္ပိုးမႈသည္ သစ္ေပ်ာ့သားႏွင့္တူညီေသာ ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္အတြက္ သစ္သားအသုံးျပဳမႈေလ်ာ့က်ေစရန္ ေပါ့ပါးေသာ စကၠဴအျဖစ္ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စကၠဴမ်ိဳးကို ေျမာင္းေဖာ္ထားေသာေသတၱာပုံစံႏွင့္တြဲစပ္လိုက္ပါက အျခားမည္သည့္စကၠဴထူထုတ္ပိုးမႈမ်ားထက္ မဆို ပိုမိုေပါ့ပါးၿပီး တာရွည္ခံႏိုင္တဲ့ အစိမ္းေရာင္စကၠဴထူကိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။ SCG သည္ ေဈးဆိုင္ႏွင့္အိမ္မ်ားမွ အသုံးမလိုေသာ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုစုေဆာင္းရန္ သုံးစြဲသူမ်ား လိုအပ္ခ်က္ကိုေျဖရွင္းေပးမည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာတစ္ခုကိုတီထြင္ေနၿပီး လက္လီျပန္ေရာင္း ေသာဆိုင္မ်ားမွလည္း က်န္ရွိေနေသာအရာမ်ားကို ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ စုေဆာင္းျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ မ်ားျပားလွသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
သမရိုးကျစီးပွားရေး ( Linear economy ) တစ်ခုမှနေ၍ CIRCULAR ECONOMY တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ဆိုသည်မှာ လွယ်ကူသောအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သို့ပေမယ့် ယခုလိုပြောင်းလဲမှုသာ အောင်မြင်သွားခဲ့မယ်ဆိုလျှင် ဤစီးပွားရေးစနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအထိပါ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝတွေ ဖန်တီးဖို့၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေလျော့ချဖို့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကောင်းကျိုးတွေကိုပါ သယ်ဆောင်လာပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမရိုးကျစီးပွားရေး ( Linear economy ) လမ်းကြောင်းဆိုသည်မှာ ‘’TAKE-MAKE- DISPOSE’’ ဆိုသောစကားလို ပြန်လည်ရရှိနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမပါသော တစ်လမ်းသွားစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သမရိုးကျစီးပွားရေး၏လမ်းကြောင်း ( Linear economy )ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရ ပြန်လည်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် အနုတ်လက္ခဏာတွေသာ ပိုများနေပါတယ်။
CIRCULAR ECONOMY စနစ်မှာ ပြုလုပ်အသုံးပြုပြီးပြန်လည်ရရှိသော ( MAKE-USE-RETURN ) လုပ်ငန်းစဉ်အရ ကုန်ချောထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းများမှ ထွက်လာသော အသုံးဝင်စွန့်ပစ်စွမ်းအင် နှင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီး ဆက်နွယ်လျက်ရှိသောလူမှုဘဝတွေ အားလုံးကို စနစ်တကျတိုးတက်လာစေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ CIRCULAR ECONOMY အတွက် မူဝါဒလမ်းညွှန်များကို ချမှတ်ခြင်းဖြင့် အစိုးရဘက်မှလည်း ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကျိုးကျေးဇူးများရရှိရန် တွဲဖက်ခေါင်းဆောင်များဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်သွားခဲ့ပါက ကုမ္ပဏီများကို ၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များ အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်နိုင်စေရန် အကူအညီဖြစ်စေရုံသာမကပဲ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် လုံလောက်သော အရင်းအမြစ်များကို ရရှိစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိလူကြီးများလက်ထပ်မှ နောင်လာမည့် မျိုးဆက်သစ်များအတွက် မျိုးစေ့ချထားပေးခဲ့မည့် အမွေအနှစ်တစ်ခုလည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
The Circular Economy – အရင်းအမြစ်များကို ကျော်လွန်၍ အချိန်နှင့်အမျှ အကျိုးရှိအောင် လှုံဆော်ခြင်း
CIRCULAR ECONOMY စနစ်သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့်မဟုတ်ပဲ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြု လုပ်ကိုင်နေသော စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးပုံစံများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ ဒီစီးပွားရေးစနစ်ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းစနစ်မှာတော့ စီးပွားရေးထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ဖို့အတွက် စက်မှုလက်မှုကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် ယင်းကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်စပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းများကို လွှမ်းခြုံရန် ထိရောက်သော ချဉ်းကပ်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်ရေးအဆင့်မှာလည်း မြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်တဲ့ ကြာရှည်ခံပုံစံ၊ ထိန်းသိမ်းမှု၊ ပြုပြင်မှု၊ ပြန်အသုံးပြုခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းနဲ့ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းတို့ကို ကျော်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံနိုင်ငံများမှ တင်ပို့ကုန်များ တိုးတက်လာခြင်းကို လက်ခံလာခြင်းဟာ လူမှုဘဝတွေကို တိုးတက်မြင့်မားလာစေပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လည်း ကြွယ်ဝမှုများကို ထပ်မံသယ်ဆောင် ပေးမယ့်အပြင် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စီးပွားရေးလမ်းစဉ်ကို ဖော်ဆောင်ကြမည့် မူဝါဒသစ်ချမှတ်သူများကိုလည်း သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ CIRCULAR ECONOMYအတွင်းတွင် နက်ရှိုင်းစွာဝင်ရောက်နေသေးတဲ့ ပုံသေစီးပွားရေး၏ လမ်းစဉ်များတွေကတော့ သဘာဝသယံဇာတများ ပျက်စီးမှု၊ လူမှုရေးမညီမျှမှုနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် သက်ရောက်မှုများ၏ အန္တရာယ်အကျိုးဆက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ လျင်မြန်စွာကုန်ခမ်းနေတဲ့ဒေသများဖြစ်လာစေပြီးတော့ အာဆီယံဒေသနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိတော့သည့် လမ်းစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါတယ်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကို တစ်မျိုးဆီပြန်လည်ခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ ယင်းပစ္စည်းများကို ထုတ်ကုန်သစ်များထုတ်လုပ်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အခြားစွမ်းအင်များအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းဟာ အဖြစ်နိုင်ဆုံးနဲ့ ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကုန်ကြမ်းများထပ်မံဝယ်ယူရန်သက်သာပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ CIRCULAR ECONOMY ဥပမာအနေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်သူက သုံးစွဲသူများဆီကို ပေးပို့ရမှာမဟုတ်ပဲ သက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းအလိုက် ပစ္စည်းအားလုံးကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်မယ့်အာမခံလည်းရှိသလို အမြတ်အစွန်းအများဆုံးရရှိနိုင်မယ့် စီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းများမှ ရုတ်တရက်ကျဆင်းခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
CIRCULAR ECONOMY အစကိုတော့ နည်းပညာသစ်ဖြစ်စေ နည်းပညာမလိုသော ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်မှာဖြစ်စေ စတင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်သူနှင့် အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုများရဲ့ ပြောင်းလဲမှုဆက်နွယ်ချက်များ၊ သုံးစွဲသူနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင့်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်သစ်များမိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် မြှင့်တင်ဖို့လိုအပ်ချက်တစ်ခု၊ ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ နည်းပညာမျှဝေမှုများ၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဆက်နွယ်မှုများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိုက်ညီမှုများပါဝင်ပါတယ်။ ယင်းတို့ထဲကမှ အများစုကတော့ လုံလောက်တဲ့အချက်အလက်ရရှိနိုင်မှုနှင့် App များ၊ websites များ၊ သုံးစွဲသူနှင့် ၎င်းတို့၏နည်းပညာများနှင့် သုံးစွဲသူအသုံးပြုနေသော အခြေခံအချက်အလက်များပေါ် မူတည်ပါတယ်။
CIRCULAR ECONOMY ဖြစ်စဉ်ကို SCG လိုမျိုး အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ဦးစီးဦးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုမှ စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
SCG မှ CIRCULAR ECONOMY စနစ်၏အဓိကအချက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ယင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအမြင်သစ်များ၊ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးများပါ ပါဝင်သည့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောပန်းတိုင်များကို ရရှိစေမည့်သော့ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ SCG မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၌လေ့ကျင့်မည့်အပိုင်းတွင် CIRCULAR ECONOMY စနစ်ကို ထည့်သွင်းရန် ကြိုးစားပေးခဲ့ပါတယ်။ CIRCULAR ECONOMY စနစ်၏နည်းဥပဒေများကို လူထုလိုအပ်ချက် မြင့်တက်လာမှုနှင့် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှုလုပ်ငန်းများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် တည်မြဲလာသော အပြုအမူပြောင်းလဲမှုများကို ဦးတည်၍ ပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်ကိုပါ ထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားပေးခဲ့ပါတယ်။ တက်ကြွသောပါဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကို လူတန်းစားအားလုံး ပါဝင်လာအောင် မြှင့်တင်ဖို့အတွက် SCG မှရည်ရွယ်ပါတယ်။ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းက CIRCULAR ECONOMYစနစ် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ပြုလုပ်ရာမှာ သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
CIRCULAR ECONOMY စနစ်ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းစီးပွားရေးစနစ်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းမဟုတ်သော အရာများ၏ ဆက်စပ်မှုနှင့် အသုံးချမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်တင်ပြခြင်း၊ တီထွင်ဖန်တီးခြင်း၊ တန်ဖိုးပေါင်းထည့်ခြင်း၊ စနစ်ပြန်ဆွဲခြင်းနှင့် ပြန်လည်စတင်ခြင်းတို့မှ ခရုပတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ချဉ်းကပ်ရန် ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့် အရင်းအမြစ်သစ်များအသုံးပြုမှုကို နည်းသထက်နည်းအောင် ပြုလုပ်ပြီး အရင်းအမြစ်များ၏တန်ဖိုးကို အမြင့်မားဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်သောတန်ဖိုးများနှင့် ရေရှည်ကောင်းကျိုးပေးနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တည်ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
CIRCULAR ECONOMY စနစ် အမှန်တကယ်အကောင်အထည်ပေါ်လာစေဖို့ အဓိကသော့ချက်မှာ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် လုပ်ငန်းရှင် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးမှ အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်။ SCG သည်နိုင်ငံတကာအတွက်ရော ပြည်တွင်းအခြေအနေအတွက်ပါ ပြည့်စုံပြီးရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲသော CIRCULAR ECONOMY စနစ်တစ်ခုရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာအားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆက်သွယ် လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြင့်ကာ ဦးဆောင်သွားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သဘောတူထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် တာရှည်ခံပလတ်စတစ်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် လူထုနှင့်ပုဂ္ဂလိကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ CIRCULAR ECONOMY စနစ်တန်ဖိုးများပေါ်တွင်အခြေခံ၍ လူမှုစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် Rayong ပြည်နယ် Map Ta Phut စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲရေးကွန်ယက် တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ Dow Thailand Group နှင့်အတူ နည်းပညာဆိုင်ရာများကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်၍ ယင်းကုမ္ပဏီ၏ သိုဝှက်ထားသော လျှို့ဝှက်လုပ်ငန်း ဖြစ်သည့် Recycled Plastic Road အမည်ရှိ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်များကို နိုင်လွန်ကတ္တရာနှင့်ရော၍ ကြာရှည်ခံလမ်းများပြုလုပ်ခြင်းကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာသည် အရင်းအမြစ်များ လုံလုံလောက်လောက် နှင့် လက်တွေ့စုစည်းရန် ပြုလုပ်ပေးနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံ တွင် BIM ( အဆောက်အဦးအချက်အလက်များပုံဖော်ခြင်း ) ဟုခေါ်သော လက်မှုအနုပညာ၊ တည်ဆောက်ရေးနှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များလိုမျိုး အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း၊ ပုံစံပြုလုပ်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးတွဲဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် ဉာဏ်ရည်မြင့် 3D စနစ်အခြေခံနည်းပညာကို ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကျိုးရလာဒ်များသည် အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ကိုင်နေသူများအားလုံးအတွက် အချက်အလက်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွင် အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCG မှ ဤအခြေအနေကိုကြိုတင်သိရှိထားပြီး BIM ကို စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သာမကပဲ BIMINONE ဟုအမည်ပေးထားသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ဖက်ကိုက်ညီမှုရှိသည့်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကိုလျော့ချရန်အတွက် အချက်အလက်များတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ တိကျသောပမာဏနှင့် အချိန်ကို အဆောက်အဦး တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသူကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမည့် BIM အတွက်ပစ္စည်းတိုက်ကို ထုတ်လုပ်သူများ ဖန်တီးခွင့်ပြုမည့်နေရာတစ်ခု တစ်ခုပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။
ထို့အပြင် SCG ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သင့်လျော်အောင်ဖန်တီးလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ထုတ်ပိုးမှုလုပ်ငန်း၏စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်လည်း အသုံးပြုထားသောစွန့်ပစ်စက္ကူများကိုစုဆောင်းကာပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိစွာလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဤထုပ်ပိုးမှုသည် သစ်ပျော့သားနှင့်တူညီသော ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အတွက် သစ်သားအသုံးပြုမှုလျော့ကျစေရန် ပေါ့ပါးသော စက္ကူအဖြစ်ပြုလုပ်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော စက္ကူမျိုးကို မြောင်းဖော်ထားသောသေတ္တာပုံစံနှင့်တွဲစပ်လိုက်ပါက အခြားမည်သည့်စက္ကူထူထုတ်ပိုးမှုများထက် မဆို ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး တာရှည်ခံနိုင်တဲ့ အစိမ်းရောင်စက္ကူထူကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ SCG သည် ဈေးဆိုင်နှင့်အိမ်များမှ အသုံးမလိုသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းရန် သုံးစွဲသူများ လိုအပ်ချက်ကိုဖြေရှင်းပေးမည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာတစ်ခုကိုတီထွင်နေပြီး လက်လီပြန်ရောင်း သောဆိုင်များမှလည်း ကျန်ရှိနေသောအရာများကို ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် စုဆောင်းခြင်း ကဲ့သို့သော များပြားလှသည် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
“စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရန် အားသွန်လုပ်ဆောင်ရမည့် အရာများမှာ ထိရောက်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သက်ဆိုင်ရာအလိုက် စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် ခွဲခြားခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုမှုကို လုံလောက်စေနိုင်မှာသာမကဘဲ သုံးစွဲမှုရလာဒ်အနေဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးကြားတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြဿနာကို လျော့ချနိုင်မှာလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း သုံးစွဲနိုင်သလောက်ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုခွဲခြားပစ်ခြင်းနှင့် နောင်အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကမ္ဘာကြီးကို မျိုးစေ့ချပေးခြင်းစတဲ့ အလေ့အကျင့်များကို လိုက်နာကြပြီး စံနမူနာကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဇူလိုင် 10, 2019 နေ့
တစ္ေန႔သ၌ အဘမင္းသိခၤႏွင့္ ကၽြန္ုပ္သည္ကန္ေတာ္ႀကီးကို ပတ္၍လမ္းေလွ်ာက္ေနခဲ့ၾကေလ၏။ တစ္ေနရာသို႔အေရာက္တြင္ အဘသည္ အိမ္အိုႀကီးတစ္လံုးအား ေမးျဖင့္ညႊန္ျပလွ်က္-
“အဲဒီအိမ္မွာ မိန္းမလ်ာေတြ ရွိလိမ့္မယ္ကြ… ”ဟုေျပာေလ၏။ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ထိုအခိုက္ ထိုအိမ္ႀကီးအတြင္းမွ မိန္းမလ်ာႏွစ္ဦးသည္ ကႏြဲ႔ကလ်ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ ထြက္လာၾကပါေလေတာ့၏။ ကၽြန္ုပ္လည္း အလြန္ပင္အံ့ၾသသြားကာ-
“အဘ … ဟုတ္လိုက္တာအဘရယ္… အဘက အဲဒီအိမ္ႀကီးထဲမွာ မိန္းမလ်ာေတြ ရွိေနၾကလိမ့္မယ္ဆိုတာကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး သိေနတာလဲ အဘရဲ႕… ဟုေမးမိလွ်င္ အဘကျပံဳးလွ်က္ ထိုအိမ္ႀကီး၏ အေရွ႕မ်က္ႏွာစာမွ ကုက္ၠိဳပင္အိုႀကီးတစ္ပင္ကို ေမးျဖင့္ ညႊန္ျပလိုက္ျပန္ေလ၏။
“ဘာလဲ အဘရဲ႕ … ”ဟုျပန္၍ေမးလိုက္မိျပန္ေလ၏။ အဘက-
“ဒီလိုကြ…၊ အဲဒီအိမ္ႀကီးရဲ႕ေရွ႕ကကုက္ၠိဳပင္ႀကီးမွာ ႏြယ္ပင္တစ္ပင္ပတ္ေနတယ္ေလကြာ… ။ အဲဒီလို ပင္စည္ပင္ေစာက္ရွိတဲ့ အပင္မ်ိဳးကို ႏြယ္ပင္ကပတ္ေနရင္ အဖိုကိုအမက ပတ္ေနတဲ့သေဘာ၊ အဖိုကိုအမကလႊမ္းမိုးေနတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနလို႔ အဲဒီအိမ္မ်ိဳးမွာ မိန္းမလ်ာေတြ ေနေလ့ရွိတယ္လို႔ ေရွးကေဆးဆရာႀကီး ဦးထြန္းျမတ္တို႔ရဲ႕ဆန္းေဟာကြက္ေတြရွိဖူးတယ္ကြ … ”ဟုေျပာျပရာ ကၽြန္ုပ္လည္းေခါင္းကို တဆိတ္ဆိတ္ညိတ္လွ်က္-
“ေၾသာ္… ဒီလိုကိုး… ” ဟုေရရြတ္မိလိုက္ရပါေလေတာ့၏။
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ တေရြ႕ေရြ႕ႏွင့္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လာခဲ့ၾကေလ၏။ တစ္ေနရာသို႔ အေရာက္တြင္ လမ္းေဘးရွိ အုတ္ခံုေလးတစ္ခုေပၚတြင္ ထိုင္၍နားၾကရင္း ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္သား ေဆးလိပ္ေသာက္ၾကေလ၏။ အဘက ငါးသံုးလံုး စီးကရက္ကို ေသာက္ေလ၏။ ကၽြန္ုပ္ကေရႊျပည္စိုး ေဆးေပါ့လိပ္ကို ဖြာေလ၏။
“တစ္ခ်ိဳ႕က ေဆးလိပ္ေသာက္ရင္ အေမာမခံႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္… ၊ ငါတို႔ကက်ေတာ့ အေမာေျဖတဲ့အေနနဲ႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနၾကပါလား …၊ ဒါျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက ေမာေစတာလား… ၊ အေမာေျပေစတာလားကြာ… ” ဟုအဘက ေမးလိုက္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္က-
“မစဥ္းစားမိပါဘူး အဘရယ္…၊ အဘပဲ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ေတြးမိတယ္” ဟုျပန္၍ ေျပာလိုက္ရာ အဘကရယ္ေလ၏။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ-
“အဲသလို အျမင္မတူတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ျငင္းၾကရင္ ရန္ထသတ္တာပဲ အဖတ္တင္လိမ့္မယ္… ။ ႏွစ္ေယာက္လံုးကေတာ့ ကိုယ္အမွန္ပဲလို႔ပဲ ယူဆထားၾကမွာပဲေလ… ။ အဲဒါဟာ… တကယ့္အမွန္တရားက သပ္သပ္၊ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အမွန္တရားကသပ္သပ္ ျဖစ္ေနတယ္… ။ အဲသလိုတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕၊ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီရဲ႕၊ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီရဲ႕၊ ပုဂ္ၢလိကအမွန္တရားေတြေၾကာင့္ပဲ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလည္း စစ္ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ ကမၻာစစ္ႀကီးေတြေတာင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္…၊ တကယ္ကေတာ့… ႏွစ္ဘက္လံုး မွန္ေနၾကတာကိုက မွားေနၿပီကိုယ့္လူေရ …. ” ဟုေျပာေလရာကၽြႏ္ုပ္လည္း-
“အဘပဲေပါက္ေပါက္ရွာရွာ…၊ ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ မေတြးမိပါဘူး အဘရယ္… ” ဟုသာ ျပန္ေျပာလိုက္ မိပါေလေတာ့၏။ ထိုအခိုက္မွာပင္ အဘသည္ မ်က္ေစာင္းထိုးခပ္လွမ္းလွမ္းရွိ အိမ္တစ္အိမ္အား လွမ္း၍ ေမးျဖင့္ညႊန္ျပကာ-
“ အဲဒီအိမ္ကအိမ္သား တစ္ေယာက္မွာ ႏွာေခါင္းမွာမွဲ႔တို႔အမွတ္တို႔ ရွိတတ္တယ္ကြ” ဟု ျပန္ေျပာေလ၏။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ထိုအိမ္အတြင္းမွ မိန္းမတစ္ဦးသည္ ေစ်းျခင္းေတာင္းကေလးကို ဆြဲလ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရွိရာဘက္သို႔ တစ္လွမ္းျခင္း ေလွ်ာက္လာေလ၏။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထိုအမ်ိဳးသမီးကို မသိမသာ အေသအခ်ာၾကည့္ရင္း ျဖစ္သြားရျပန္ေလ၏။ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ ႏွာေခါင္းတြင္မွဲ႔နက္ႀကီးတစ္လံုးသည္ ထင္ထင္ရွားရွားပင္ ရွိေနေလ၏။ ကၽြႏ္ုပ္က-
“ အံ့ၾသစရာေကာင္းလိုက္တာ အဘရယ္…. ။ အဲဒီအိမ္က ထြက္လာတဲ့ မိန္းမရဲ႕ႏွာေခါင္းေပၚမွာ မွဲ႔ႀကီးမွ အႀကီးႀကီးပဲ အဘရဲ႕ အဘဘယ္လိုလုပ္ၿပီး သိတာလဲ…. ”ဟုေမးလိုက္မိလွ်င္ အဘကျပံဳးလ်က္-
“ ဒီလိုကြ…. ႏွာေခါင္းမွာ ထူးထူးျခားျခားမွဲ႔တို႔ အမွတ္တို႔ပါတဲ့လူေတြဟာ ေရတြင္းေရကန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြကို မ်က္ႏွာမူထားတဲ့အိမ္မ်ိဳးမွာ ေနရတတ္တယ္ကြ။ အဲဒီအိမ္ေရွ႕မွာ ဧရာမေရကန္ႀကီးတစ္ကန္ ထူးထူးျခားျခား ရွိေနေလေတာ့ ဒီအိမ္က အိမ္သူအိမ္သားေတြမွာလည္း ႏွာေခါင္းမွာမွဲ႔ေတြ အမွတ္ေတြ ပါႏိုင္တယ္လို႔ ေကာက္ယူလိုက္တာပါကြာ…. ”ဟုေျပာျပေလ၏။ ကၽြႏ္ုပ္လည္း-
“ေၾသာ္… ဒီလိုကိုး … ”ဟုေရရြတ္လိုက္မိျပန္ပါေလေတာ့၏။
ဤသို႔ျဖင့္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဘမင္းသိခၤ၏ တပည့္မ်ားသည္ အဘႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရင္း အဘထံမွ ေဗဒင္ပညာရပ္မ်ားသာမက အေထြေထြေသာ ဗဟုသုတမ်ား မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားကို နာရီႏွင့္အမွ် ၾကားရ၊ မွတ္သားခဲ့ၾကရပါေလ၏။
မိမိတို႔အိမ္မ်ား ဆိုင္မ်ား၊ အလုပ္ခန္းမ်ား၊ ရံုးခန္းမ်ားတြင္ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာပိုင္းသည္ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးေလ၏။ မိမိတို႔၏ အဂၤလိပ္ေမြးရက္ ဂဏန္းကိုလိုက္၍ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာပိုင္းတြင္ ထားရွိသင့္ေသာအရာမ်ားလည္း ရွိပါေလ၏။ သို႔ျဖင့္ပါေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြတို႔၏ က်န္းမာေရး၊ ခ်မ္းသာေရး၊ ေအာင္ျမင္ေရးတို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစအံ့ေသာငွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားလိုက္ရပါေပသတည္း…။ ။
တစ်နေ့သ၌ အဘမင်းသိင်္ခနှင့် ကျွန်ုပ်သည်ကန်တော်ကြီးကို ပတ်၍လမ်းလျှောက်နေခဲ့ကြလေ၏။ တစ်နေရာသို့အရောက်တွင် အဘသည် အိမ်အိုကြီးတစ်လုံးအား မေးဖြင့်ညွှန်ပြလျှက်-
“အဲဒီအိမ်မှာ မိန်းမလျာတွေ ရှိလိမ့်မယ်ကွ… ”ဟုပြောလေ၏။ တိုက်ဆိုင်စွာပင် ထိုအခိုက် ထိုအိမ်ကြီးအတွင်းမှ မိန်းမလျာနှစ်ဦးသည် ကနွဲ့ကလျလျှောက်လှမ်းလျက် ထွက်လာကြပါလေတော့၏။ ကျွန်ုပ်လည်း အလွန်ပင်အံ့သြသွားကာ-
“အဘ … ဟုတ်လိုက်တာအဘရယ်… အဘက အဲဒီအိမ်ကြီးထဲမှာ မိန်းမလျာတွေ ရှိနေကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သိနေတာလဲ အဘရဲ့… ဟုမေးမိလျှင် အဘကပြုံးလျှက် ထိုအိမ်ကြီး၏ အရှေ့မျက်နှာစာမှ ကုက်္ကိုပင်အိုကြီးတစ်ပင်ကို မေးဖြင့် ညွှန်ပြလိုက်ပြန်လေ၏။ ကျွန်ုပ်က နားမလည်စွာဖြင့်-
“ဘာလဲ အဘရဲ့ … ”ဟုပြန်၍မေးလိုက်မိပြန်လေ၏။ အဘက-
“ဒီလိုကွ…၊ အဲဒီအိမ်ကြီးရဲ့ရှေ့ကကုက်္ကိုပင်ကြီးမှာ နွယ်ပင်တစ်ပင်ပတ်နေတယ်လေကွာ… ။ အဲဒီလို ပင်စည်ပင်စောက်ရှိတဲ့ အပင်မျိုးကို နွယ်ပင်ကပတ်နေရင် အဖိုကိုအမက ပတ်နေတဲ့သဘော၊ အဖိုကိုအမကလွှမ်းမိုးနေတဲ့သဘော သက်ရောက်နေလို့ အဲဒီအိမ်မျိုးမှာ မိန်းမလျာတွေ နေလေ့ရှိတယ်လို့ ရှေးကဆေးဆရာကြီး ဦးထွန်းမြတ်တို့ရဲ့ဆန်းဟောကွက်တွေရှိဖူးတယ်ကွ … ”ဟုပြောပြရာ ကျွန်ုပ်လည်းခေါင်းကို တဆိတ်ဆိတ်ညိတ်လျှက်-
“သြော်… ဒီလိုကိုး… ” ဟုရေရွတ်မိလိုက်ရပါလေတော့၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တရွေ့ရွေ့နှင့် ဆက်လက် လျှောက်လာခဲ့ကြလေ၏။ တစ်နေရာသို့ အရောက်တွင် လမ်းဘေးရှိ အုတ်ခုံလေးတစ်ခုပေါ်တွင် ထိုင်၍နားကြရင်း ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်သား ဆေးလိပ်သောက်ကြလေ၏။ အဘက ငါးသုံးလုံး စီးကရက်ကို သောက်လေ၏။ ကျွန်ုပ်ကရွှေပြည်စိုး ဆေးပေါ့လိပ်ကို ဖွာလေ၏။
“တစ်ချို့က ဆေးလိပ်သောက်ရင် အမောမခံနိုင်ဘူးလို့ ပြောကြတယ်… ၊ ငါတို့ကကျတော့ အမောဖြေတဲ့အနေနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်နေကြပါလား …၊ ဒါဖြင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက မောစေတာလား… ၊ အမောပြေစေတာလားကွာ… ” ဟုအဘက မေးလိုက်လျှင် ကျွန်ုပ်က-
“မစဉ်းစားမိပါဘူး အဘရယ်…၊ အဘပဲ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ တွေးမိတယ်” ဟုပြန်၍ ပြောလိုက်ရာ အဘကရယ်လေ၏။ ထို့နောက်တွင်မှ-
“အဲသလို အမြင်မတူတဲ့ လူနှစ်ယောက်ငြင်းကြရင် ရန်ထသတ်တာပဲ အဖတ်တင်လိမ့်မယ်… ။ နှစ်ယောက်လုံးကတော့ ကိုယ်အမှန်ပဲလို့ပဲ ယူဆထားကြမှာပဲလေ… ။ အဲဒါဟာ… တကယ့်အမှန်တရားက သပ်သပ်၊ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အမှန်တရားကသပ်သပ် ဖြစ်နေတယ်… ။ အဲသလိုတစ်ဦးချင်းစီရဲ့၊ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီရဲ့၊ တစ်နိုင်ငံချင်းစီရဲ့၊ ပုဂ်္ဂလိကအမှန်တရားတွေကြောင့်ပဲ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံလည်း စစ်တွေဖြစ်ကြတယ်။ ကမ္ဘာစစ်ကြီးတွေတောင် ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်…၊ တကယ်ကတော့… နှစ်ဘက်လုံး မှန်နေကြတာကိုက မှား
နေပြီကိုယ့်လူရေ …. ” ဟုပြောလေရာကျွန်ုပ်လည်း-
“အဘပဲပေါက်ပေါက်ရှာရှာ…၊ ကျွန်တော်ဖြင့် မတွေးမိပါဘူး အဘရယ်… ” ဟုသာ ပြန်ပြောလိုက် မိပါလေတော့၏။ ထိုအခိုက်မှာပင် အဘသည် မျက်စောင်းထိုးခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ အိမ်တစ်အိမ်အား လှမ်း၍ မေးဖြင့်ညွှန်ပြကာ-
“ အဲဒီအိမ်ကအိမ်သား တစ်ယောက်မှာ နှာခေါင်းမှာမှဲ့တို့အမှတ်တို့ ရှိတတ်တယ်ကွ” ဟု ပြန်ပြောလေ၏။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် ထိုအိမ်အတွင်းမှ မိန်းမတစ်ဦးသည် ဈေးခြင်းတောင်းကလေးကို ဆွဲလျက် ကျွန်ုပ်တို့ရှိရာဘက်သို့ တစ်လှမ်းခြင်း လျှောက်လာလေ၏။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုအမျိုးသမီးကို မသိမသာ အသေအချာကြည့်ရင်း ဖြစ်သွားရပြန်လေ၏။ ထိုအမျိုးသမီး၏ နှာခေါင်းတွင်မှဲ့နက်ကြီးတစ်လုံးသည် ထင်ထင်ရှားရှားပင် ရှိနေလေ၏။ ကျွန်ုပ်က-
“ အံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ အဘရယ်…. ။ အဲဒီအိမ်က ထွက်လာတဲ့ မိန်းမရဲ့နှာခေါင်းပေါ်မှာ မှဲ့ကြီးမှ အကြီးကြီးပဲ အဘရဲ့ အဘဘယ်လိုလုပ်ပြီး သိတာလဲ…. ”ဟုမေးလိုက်မိလျှင် အဘကပြုံးလျက်-
“ ဒီလိုကွ…. နှာခေါင်းမှာ ထူးထူးခြားခြားမှဲ့တို့ အမှတ်တို့ပါတဲ့လူတွေဟာ ရေတွင်းရေကန်၊ မြစ်ချောင်းတွေကို မျက်နှာမူထားတဲ့အိမ်မျိုးမှာ နေရတတ်တယ်ကွ။ အဲဒီအိမ်ရှေ့မှာ ဧရာမရေကန်ကြီးတစ်ကန် ထူးထူးခြားခြား ရှိနေလေတော့ ဒီအိမ်က အိမ်သူအိမ်သားတွေမှာလည်း နှာခေါင်းမှာမှဲ့တွေ အမှတ်တွေ ပါနိုင်တယ်လို့ ကောက်ယူလိုက်တာပါကွာ…. ”ဟုပြောပြလေ၏။ ကျွန်ုပ်လည်း-
“သြော်… ဒီလိုကိုး … ”ဟုရေရွတ်လိုက်မိပြန်ပါလေတော့၏။
ဤသို့ဖြင့်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့အဘမင်းသိင်္ခ၏ တပည့်များသည် အဘနှင့်အတူ နေထိုင်ခဲ့ကြရင်း အဘထံမှ ဗေဒင်ပညာရပ်များသာမက အထွေထွေသော ဗဟုသုတများ မှတ်သားဖွယ်ရာများကို နာရီနှင့်အမျှ ကြားရ၊ မှတ်သားခဲ့ကြရပါလေ၏။
မိမိတို့အိမ်များ ဆိုင်များ၊ အလုပ်ခန်းများ၊ ရုံးခန်းများတွင် ရှေ့မျက်နှာစာပိုင်းသည် လွန်စွာမှ အရေးကြီးလေ၏။ မိမိတို့၏ အင်္ဂလိပ်မွေးရက် ဂဏန်းကိုလိုက်၍ ရှေ့မျက်နှာစာပိုင်းတွင် ထားရှိသင့်သောအရာများလည်း ရှိပါလေ၏။ သို့ဖြင့်ပါသောကြောင့် မိတ်ဆွေတို့၏ ကျန်းမာရေး၊ ချမ်းသာရေး၊ အောင်မြင်ရေးတို့အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေအံ့သောငှာ အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားလိုက်ရပါပေသတည်း…။ ။